32 Munguva iyi vanhu vakaona kuti Mosesi akanga achinonoka kuburuka mugomo.+ Naizvozvo vanhu vakaunganira Aroni, vakati kwaari: “Simuka, tigadzirire mwari achatitungamirira,+ nokuti Mosesi uyu, murume uya akatibudisa munyika yeIjipiti,+ hatizivi kuti chii chakaitika kwaari.” 2 Aroni akati kwavari: “Bvisai mhete dzendarama+ dziri panzeve dzemadzimai enyu, dzevanakomana venyu nedzevanasikana venyu muuye nadzo kwandiri.” 3 Zvino vanhu vose vakatanga kubvisa mhete dzendarama dzaiva panzeve dzavo vachiuya nadzo kuna Aroni. 4 Iye akabva atora ndarama yacho pamaoko avo, akaigadzira+ nechokuvezesa, akaigadzirisa mufananidzo wemhuru wakaumbwa nezvakanyungudutswa.+ Ivo vakatanga kuti: “Haiwa iwe Israeri, uyu ndiye Mwari wako, akakubudisa munyika yeIjipiti.”+ 5 Aroni paakazviona, akavaka atari pamberi pawo. Aroni akazoshevedzera akati: “Mangwana kune mutambo uchaitirwa Jehovha.” 6 Naizvozvo zuva rakatevera racho vakafumomuka, vakapa zvinopiwa zvinopiswa nokupa zvibayiro zvokugoverana. Pashure paizvozvo vanhu vakagara pasi kuti vadye nokunwa. Vakabva vasimuka kuti vafare.+ 7 Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Enda, buruka, nokuti vanhu vako vawakabudisa munyika yeIjipiti vaita zvakaipa.+ 8 Vakurumidza kutsauka panzira yandakavarayira kuti vafambe nayo.+ Vagadzira mufananidzo wavo wemhuru wakaumbwa nezvakanyungudutswa uye vari kuramba vachiukotamira vachibayira zvibayiro kwauri, vachiti, ‘Haiwa iwe Israeri, uyu ndiye Mwari wako, akakubudisa munyika yeIjipiti.’”+ 9 Jehovha akati kuna Mosesi: “Ndatarira vanhu ava ndikaona kuti vanhu vane mitsipa yakaoma.+ 10 Naizvozvo ndisiye ndakadaro, kuti hasha dzangu dzivamukire uye ndivatsakatise,+ uye rega ndiite kuti iwe uve rudzi rukuru.”+ 11 Zvino Mosesi akatsvaka kuti Jehovha Mwari wake anzwe nyasha,+ akati: “Haiwa Jehovha, nei hasha+ dzenyu dzichifanira kumukira vanhu venyu vamakabudisa munyika yeIjipiti nesimba guru uye noruoko rune simba? 12 Neiko vaIjipiti+ vachifanira kuti, ‘Akavabudisa achivavarira kuita zvakaipa kuti avaurayire mumakomo, uye kuti avatsakatise panyika’?+ Dzorai hasha dzenyu huru+ muzvidembe+ pamusoro pokuitira vanhu venyu zvakaipa. 13 Yeukai Abrahamu, Isaka naIsraeri vashumiri venyu, vamakapikira muchipika nemi pachenyu,+ zvamakati kwavari, ‘Ndichaita kuti vana venyu vawande senyeredzi dzokumatenga,+ ndichapa vana+ venyu nyika yose iyi yandakasarudza, kuti vaiite yavo nokusingagumi.’”+ 14 Zvino Jehovha akazvidemba pamusoro pezvakaipa zvaakanga ataura kuti aizoitira vanhu vake.+ 15 Pashure paizvozvo Mosesi akatendeuka, akaburuka mugomo+ aine mahwendefa maviri eChipupuriro+ muruoko rwake, mahwendefa akanga akanyorwa kumativi ose. Akanga akanyorwa seri neseri. 16 Mahwendefa acho akanga ari basa raMwari, uye zvakanyorwa zvacho zvakanga zvanyorwa naMwari zvichiita zvokutemerwa pamahwendefa acho.+ 17 Zvino Joshua akanzwa ruzha rwevanhu vaishevedzera, akati kuna Mosesi: “Mumusasa mune ruzha rwehondo.”+ 18 Asi iye akati: “Harusi ruzha rwokuimba pamusoro pechinhu chaitwa nesimba guru,+Harusi ruzha rwokuimba kwokukundwa;Irwo ruzha rwokumwe kuimba rwandiri kunzwa.” 19 Naizvozvo paakanga angova pedyo nomusasa uye ava kuona mhuru yacho+ nokutamba kwacho, Mosesi akashatirwa kwazvo, akabva akanda pasi mahwendefa aiva mumaoko ake, akaaputsira mujinga megomo.+ 20 Zvino akatora mhuru yavakanga vagadzira akaipisa nomoto, akaikuya-kuya kusvikira yaita upfu,+ achibva azohumwayira pamusoro pemvura,+ akainwisa vanakomana vaIsraeri.+ 21 Mosesi akazoti kuna Aroni: “Vanhu ava vakaitei kwauri zvokuti wavaunzira chivi chikuru?” 22 Aroni akati: “Ishe wangu ngaarege hake kushatirwa kwazvo. Imi munonyatsoziva vanhu ava, kuti vanongoda kuita zvakaipa chete.+ 23 Saka vakati kwandiri, ‘Tigadzirire mwari achatitungamirira,+ nokuti Mosesi uyu, murume uya akatibudisa munyika yeIjipiti, hatizivi kuti chii chakaitika kwaari.’ 24 Nokudaro ndakati kwavari, ‘Ndivanaani vane ndarama? Ngavaibvise pavari kuti vandipe.’ Zvino ndakaikanda mumoto, mhuru iyi ikabuda imomo.” 25 Mosesi akaona kuti vanhu havana kudzoreka, nokuti Aroni akanga avarega vasingadzoreki+ kuti vazvidzwe nevaivashora.+ 26 Mosesi akabva amira pagedhi romusasa akati: “Ndiani ari kurutivi rwaJehovha? Ngaauye kwandiri!”+ Vanakomana vose vaRevhi vakatanga kuungana kwaari. 27 Zvino akati kwavari: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Mumwe nomumwe wenyu ngaasungirire bakatwa rake padivi pake. Pfuurai nomumusasa muchibva pane rimwe gedhi muchienda kune rimwe gedhi, mumwe nomumwe auraye hama yake, mumwe nomumwe auraye wokwake, uye mumwe nomumwe auraye shamwari yake yepedyo.’”+ 28 Vanakomana vaRevhi+ vakaita sezvakanga zvataurwa naMosesi, zvokuti vanhu vakafa pazuva iroro vaiva vanhu vanenge zviuru zvitatu. 29 Mosesi akati: “Nhasi ivai nesimba nokuda kwebasa raJehovha,+ nokuti mumwe nomumwe wenyu ari kurwisana nomwanakomana wake nehama yake,+ kuti iye akupei chikomborero nhasi.”+ 30 Zvino pazuva rakatevera racho, Mosesi akati kuvanhu vacho: “Imi—iyemi, makatadza kwazvo,+ zvino ndichakwira kuna Jehovha. Zvichida ndingayananisira chivi chenyu.”+ 31 Naizvozvo Mosesi akadzokera kuna Jehovha akati: “Aa, vanhu ava vakatadza kwazvo, pakuti vakazvigadzirira mwari wendarama!+ 32 Asi zvino kana mukavaregerera chivi chavo,+—uye kana zvikasadaro, ndapota, ndidzimei+ mubhuku renyu+ ramakanyora.” 33 Asi Jehovha akati kuna Mosesi: “Munhu wose akanditadzira, ndiye wandichadzima mubhuku rangu.+ 34 Zvino chiuya, tungamirira vanhu kwandakakutaurira nezvakwo. Tarira! Ngirozi yangu ichakutungamirira,+ uye pazuva randichaunza chirango ndichavaunzira chirango nokuda kwechivi chavo.”+ 35 Zvino Jehovha akatambudza vanhu nokuti vakanga vagadzira mhuru, yakanga yagadzirwa naAroni.+